Izimbiza, izintelezi nobulawu (Ingxenye yesithathu) – iAfrika
Izimbiza, izintelezi nobulawu (Ingxenye yesithathu)
La magama emithi alandelayo ngawezimbiza, izintelezi kanye nobulawu.
Unukani – Unukani usetshenziswa ngumuntu onamaphupho amabi, lawo maphupho ebangelwa wukukhafulwa ngezinye izinsizwa uma uyinsizwa. Lo muthi ngowokuphalaza, usetshenziswa nokukhipha isichitho.
Umaphipha – Intelezi yesichitho.
Umathithibala – Le ntelezi kuchelwa ngayo ekhaya, ibamba imimoya emibi nobukhunkuli.
Umthole – Umthole wubulawu okusetshenziswa amagxolo awo, usetshenziswa yizinsizwa ezishelayo ukuze zithandeke ezeshelini.
Umthombo – Lena yimbiza yomzimba, okuthi uma unomzimba omubi njengezilonda uchathe ngayo, izilonda lezi ziphela nya.
Umathunga – Umathunga yimbiza enamandla esetshenziswa ngabantu abanenkinga yeqolo.
Umathukulula – Umathukulula yimbiza yokuchatha noma yokugeqa.
Uhlunguhlungu – Intelezi enamandla, isetshenziswa kakhulu ngabantu abanemimoya yobungoma kanye namafufunyane, ukubala nje okumbalwa.
Umsululu – Lona wumuthi otshalwa ekhaya osiza uma kuduma izulu, uyasikwa uphume ubisi ukuze kudlule ulaka lwembokode. Nokho-ke umsululu uyingozi ngoba uma luke lwangena ehlweni ubisi lwawo amehlo ayavaleka.
Umashwilishwili – Lena yintelezi yokugquma, ukuphalaza, ukuchela ekhaya kanye nokugeza.
Inguduza – Inguduza yimbiza yomzimba omubi esiza kakhulu ikakhulukazi kumuntu onezilonda.
Abaphaphi – Abaphaphi wubulawu obusetshenziswa yizinsizwa uma zishela kanti futhi akugcini lapho ngoba nezanusi ziyabusebenzisa lobu bulawu.
2 thoughts on “Izimbiza, izintelezi nobulawu (Ingxenye yesithathu)”
25/06/2021 at 14:59
Ingaba umsululu uyaselwa xa yedliso NguMonwabisi alveni ndise kapa
29/06/2021 at 10:19
Cofa lapha ukuthola incazelo Izimbiza, izintelezi nobulawu (Ingxenye yesibili)